Fihazohazoana Taorian’ny Namonoan’i Indonezia ireo Voaheloka Noho ny Trafikan-dRongony avy any Aostralia, Brezila ary Nizeria · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Mey 2015 7:32 GMT
Vakio amin'ny teny Français, বাংলা, Español, Deutsch, English
Sora-baventy iray ao amin'ny seranam-piaramanidin'i Soekarno-Hatta ao Jakarta izay mampitandrina ny famonoana ho faty hoan'ireo mpaondrana zava-mahadomelina. Sary ao amin'ny Wikimedia.org
Na dia teo aza ny antso iraisampirenena sy ny tsikera ao an-toerana, dia mbola notontosain'i Indonezia ihany tamin'ny herinandro teo ny famonoana ho faty ireo olona valo voaheloka tamin'ny fanondranana zava-mahadomelina. Saingy tsy namarana ny adihevitra momba ny lalàna famonoana ho faty, ny “ady amin'ny zava-mahadomelina” ary ny mety haha-tsi-manantsiny ireo voaheloka sasantsasany izany.
Nahitana Nizeriana efatra, Aostraliana roa, Breziliana iray ary Indoneziana iray tamin'ireo novonoin'ny lalàna ho faty ireo. Nisy Filipianina iray voaheloka nahazo fampiatoan-tsazy tamin'ny ora farany rehefa ren'ny fitsarana fa mety ho tratran'ny fanondranan'olona izy rehefa nitolo-batana tao Filipina lay nolazaina fa “nampidi-kizo” azy.
Ny ampitson'ny andro famonoana, nipongatra tao amin'ny tatitra fa ilay Indoneziana voaheloka ho faty , Zainal Abidin, dia mety ho lasibatry ny ‘fahadisoana ara-pitantanam-panjakana’ rehefa navoaka fa diso toerana tao amin'ny Fitsarana ao amin'ny distrikan'i Palembang ny dosie nataony hangatahana famindram-po. Nampangaina ho nitazona rongony (marijuana) izy ary voaheloka higadra 18 taona tamin'ny voalohany nialoha ny fanamelohana azy ho faty noho ny tsy fahitana ny dosie fangatahana fitsarana ambony.
Mandritra izany fotoana izany, ren'ny vahoaka fa mikorontana ara-tsaina sy tratran'ny aretin-tsaina ilay Breziliana Rodrigo Gularte, ary efa notsipahin'ny Fitsarana an-Tampony Indoneziana ny fampakarana ny fitsarana. Tsy azony an-tsaina ny fahafatesana ampiharina aminy raha tsy minitra vitsy alohan'ny hiatrehany ireo sokajin-tafika hitifitra azy. Manao fanentanana hahazoany famelana aorian'ny fahafatesany ny fianakaviany ankehitriny.
Nihanitombo tao anatin'ny taona vitsivitsy izay ny isan'ny Indoneziana mifidy kokoa ny gadra mandra-pahafaty noho ny famonoana ho faty noho ny heloka bevava mifandraika amin'ny rongony. Na izany aza, araka ny fitsapan-kevitra nataon'ny Indo Barometer Survey Agency, ny maro an'isa amin'ny Indoneziana (84,1 isanjato) no mankatò ny fanapahan-kevitry ny governemanta tamin'ny fanatanterahana ny famonoana ireo voaheloka valo.
Ny fikambanana Islamika lehibe anankiroa ao amin'ny firenena, ny Nadhlatul Ulama sy ny Muhammadiyah dia mitovy hevitra fa tokony ampiharina amin'ny mpanao trafikan-drongony ny famonoana ho faty. Miozolomana Sonita ny ankamaroan'ny Indoneziana.
Misy fihetseham-po isan-karazany nivoaka tao amin'ny Twitter, ary misy aza ny sasany mampiasa ny diezy #BoycottIndonesia hanehoany ny tsy fankasitrahany ny famonoana.
Saingy misy ny sasany mandrisika ny mpitsikera hahatakatra ny toe-draharaha ao Indonezia, firenena iray mila mandresy ny kirakiram-piasan'ny fikambanana mpanondrana rongony misandrahaka manerantany.
Matt Hart, mpitendry gitara ao amin'ny tarika Arkana, iray amin'ireo efa nitsidika an'i Indonezia ary nahita ny fiitatry ny fandrahonana ateraky ny rongony:
Ny antony mahatonga an'i Indonezia miresaka didy famonoana ho faty noho ny trafikan-drongony dia noho ny hahagoavan'ny olana miitatra haingana ka efa tsy voafehy sahady.
Tsy tokony hamelively sy hitsaratsara an'i Indonezia amin'ny fijoroany sy ny politikany amin'ny fampiharana ny lalàna momba ny rongony ireo firenena manodidina azy fa tokony hanolo-kevitra, hanampy ary hanohana azy hiatrika ny tena olana.
Gustika Jusuf Hatta, zafikelin'i Mohamad Hatta, iray amin'ireo mpanangana an'i Indonezia, dia nanana fahatsapana mifangarika manoloana ny famonoana:
Amin'ny maha-Indoneziana ahy dia menatra tanteraka aho amin'ny fomba barbariana sy tsy mahalala fandrosoana mbola misy ao amin'ny lalànantsika. Saingy maha-te hirehareha tanteraka kosa ny fahitana fa miezaka mampihatra ny fiandrianam-pirenena tsy manaiky ny tsindrin'ny vahiny isika.
Misy ihany koa ireo Indoneziana mpisera Facebook tahaka an'i Andreas Arianto Yanuar izay mieritreritra fa tsy vahaolana mahomby manoloana ny rongony ny famonoana ho faty:
Tsy mahavaha olana any amin'ny fakany ny fiezahana manongotra ny rongony amin'ny alalan'ny famonoana ny mpanao trafika. Mpanelanelana ny mpamokatra sy ny mpanjifa ao amin'ny indostria ihany ireo mpanao trafika sy mpitsinjara ireo. Tsy haharitra ny fitsinjarana raha tsy misy ny mpamokatra sy ny mpanjifa. Hamerana ny trafikan-drongony dia mila fantarintsika ny fomba fiasan'ny indostria. Tsy mora afa-bela amin'ny fiankinan-doha amin-javatra ny olona (ao anatin'izany ny sigara sy ny toaka), midika izany fa aleo mametra sy manara-maso ny fitsinjarana sy ny fampiasana (ny rongony); amin'izay fotoana izay tsy hisy intsony ny ho faty. Fa raha hohelohina fotsiny dia tsy hahavaha olana izany.
Misy ireo Indoneziana sasantsasany efa miady hevitra amin'ny famolavolana fampihenan-danja ny famonoana ho faty amin'ny heloka mifandraika amin'ny rongony tsy ho famonoana ho faty fa ho lasa fanasaziana solony. Ny dikan'izany dia amin'ny toe-javatra sasantsasany, ho afa-mandray sazy migadra mandramaty na hahazo fampihena-tsazy ireo voaheloka miandry fotoana hamonoana azy.